Ceramic Grinding Burr - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Ceramic Grinding Burr)
I-Steatite Graming Grinding Burr ye-Pepper Mill
I-steatite ceramic yokugaya burr I-spice mill steatite yokugaya burr yenziwe nge-steatite ceramics. Kuyinto ewusizo kakhulu futhi eco-friendly material eluhlaza. Emkhakheni, i-steatite ceramic grinding burr isetshenziswa ngokujwayelekile ekusebenziseni isikhathi esisodwa se-spice grinder, i-salt grinder, i-chilli...
I-spraying ceramic ceramic burr enhle kakhulu
Spice grinder alumina ceramic ukugaya burr I-Alumina ceramic yiwona ovuthiwe kakhulu wezingubo zobunjiniyela, enikeza izindawo ezinhle zokufakelwa kagesi ngokuhambisana nobunzima obunzima nokumelana nokugqoka okuhle, kodwa ukuqina okunamandla nokuphuka okuhle. Ngenxa yalezi zakhiwo, lokhu okuthandwa kakhulu...
Brown alumina ikhofi maker ceramic ukugaya burr
Lo mshini we-alumina ekhiqiza ikhomikhali e-ceramic grinding burr yenziwe ngamapulangwe angama-95% e-aluminium oxide, ayakwazi ukuhlinzeka ngemibala eminingi, i-s uch njengemhlophe, emnyama, emnyama, emhlophe nangendlovu. Ukuze sihlangabezane nalezi zimfuno ezimakethe, sihlale silungiselela isamba esanele...
I-Ceramic Flat Grinding Burr